Khalalaaso ka taagan Puntland iyo Soomaaliland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Khalalaaso ka taagan Puntland iyo Soomaaliland
Ardaan Yare 18 November 2019
Saacadihii la soo dhaafay waxaa khalalaaso siyaadeed ay ka taagan yihiin deegaano iyo degmooyin katirsan Maamulada Puntland iyo Soomaaliland,kuwaas oo salka ku haayo dhowr waxyaabood.
Magaalada Hargeysa waxaa ka taagan xiisad u dhaxeeysa Madaxda Xukuumadda Soomaaliland iyo Xisbiga WADANI taas oo sababtay in Xubno kamid ah Xisbiga WADANI Xabsiga la dhigo.
Sidoo kale Maanta waxaa Ciidamada Booliska Soomaaliland ay la wareegeen Xarunta Dhexe ee Xisbiga Wadani ku leeyahay Hargeysa,hayeeshee ay xoog ku galeen Guddooomiyaha Xisbigaas Cabdiraxmaan Cirro iyo qaar kamid ah taageerayaashiisa.
Dhinaca kale waxaa khalalaaso siyaasadeed iyo mid amni ay ka taagan tahay deegaano katirsan Puntland,kadib markii Ciidamo katirsan kuwa Daraawiishta Puntland ay Maanta rasaaseeyeen gawaari uu la socday Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan,xilli uu marayay deegaanka Carmo ee Gobolka Bari.
Is rasaaseyn kooban oo ka dhacday degmada Carmo ayaa waxaa la sheegay in uu ku dhaawacmay hal askari,waxaana ugu dambeyn soo kala dhex-galay Odayaasha iyo waxgaradka Magaalada Carmo.
Si kastaba khalalaasaha Siyaasadeed ee xilligaan ka jira deegaano ka kala tirsan Soomaaliland iyo Puntland ayaa waxaa la sheegaa inay ku lug leedahay Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Somali Jounalists condemns Somaliland authority for the closure of Horn Cable TV station and the arrest of its editor.
Maxay ka yiraahdeen dowladaha Carbeed heshiiskii Somalia iyo Kenya?